Portiogaly: Hetsi-panoherana Ny ACTA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2012 2:48 GMT
Tamin'ny 11 Febroary 2012, tanàna maherin'ny 200 manerana izao tontolo izao no nandray anjara tamin'ilay hetsi-panoherana manerantany ho fanoherana ny ACTA – ny tetikasa fifanarahan'ny firenena maro manohitra ny varotra hosoka (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) dia mikendry hametraka foiben-telefonina iraisam-pirenena ho fiarovana ny zo fizaka-manana ara-tsaina. Tao Portiogaly, olona manodidina ny 300 teo no nanao fihetsiketsehana teny amin'ny arabe tao Lisbon, Porto, Coimbra, Viseu ary Braga, nanohana ny fanentanana tao amin'ny Facebook.
Kris Haamer namehy ny zava-nitranga tao Lisbon toy izao:
‎”Fanaovan-tsivana ny ACTA, fiverenana amin'ny didy jadona” hoy ireo vondrona, izay manao sarontava Guy Fawkes ny ankamaroany, sy niantsoantso ho amin'ny diabe Anti-ACTA ao afovoan-tanànan'i Lisbon. Tiako ho marihina fa vitsy olona no sady tsy voakarakara tsara izany hetsika izany (angamba olona teo amin'ny 200 teo fotsiny) tsy voarafitra tsara ary misafotofoto ny hafatra nalefa. Vitsy koa ireo olona miaraka amin'ny solosaina kely na iPads, iPhones, sns nizara ny zava-niseho ary fahitalavitra iray monja no liana tamin'izany.
"ACTA no olana lehibe ao Portigaly. Vitsy ny olona, tanora avokoa ny ankamaroany". Sary avy amin'i Kris Haamer tao amin'ny Foursquare (nahazoana alalana).
Tao Porto, na dia mpiserasera an-jatony aza no nanamafy ny fandraisany anjara amin'ny hetsim-panoherana tao amin'ny Facebook , dia olona vitsy am-polony ihany no tonga nifampitaona tao amin'ny làlana Aliados, eo anoloan'ny Lapan'ny Tànana. Avy any Braga avokoa ny ankamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana, nanapa-kevitra hampiray ny heriny ao amin'ny tanàna iray ao Avaratra izy ireo, noho ny fahavitsin'ny olona nandray anjara.
Hetsi-panoherana tao Porto. Sary avy amin'i Nuno Gomes tao amin'ny G+ (nahazoana alalana).
Nalefa mivantana tao amin'ny bilaogin'ny #AnonymousPortugal ny hetsi-panoherana, ary avy eo nalefa tao amin'ny gazety Notícias, mba ahafahan'ny fampahalalam-baovao mahazatra mitantara izany, anaty fahombiazana.
Tao Coimbra, valin-teny fandraisana anjara 154 no tao amin'ny Facebook, kanefa olona 21 ihany no namonjy ny hetsika.
Hetsi-panoherana tao Coimbra. Sary nalefan'olona tsy fantatra anarana (nahazoana alalana).
"Manana teny filamatra aho saingy tratry ny sivany izany." Sary avy amin'i Coimbra nalefan'olona tsy fantatra (nahazoana alalana).
Tao Viseu, olona 7 fotsiny no namonjy ny hetsika. Nisy hetsika hafa nokarakaraina kosa amin'ny 18 Febroary ho avy izao ao Évora.
Mpitolona momba ny olana ara-fizaka-manana ara-tsaina i Maria João Nogueira, namoaka taratasy misokatra ho an'ny Praiminisitra Pedro Passos Coelho tao amin'ny bilaoginy, izay nilazany fa firenena sasany no nihemotra tamin'ny fanaovan-tsonia ny fifanekena, ary nampatsiahy izy hoe:
Efa nanao sonia ny ACTA tamin'ny anaran'ny Portiogaly ny masoivoho Portiogey ao Japana (mbola tsy hitako niala tsiny anefa izy), kanefa, hafahafa ihany, tsy mba nisy akory fampilazana mahakasika izany fanaovan-tsonia izany, na ny momba ny fanapahan-kevitry ny governemanta Portiogey mikasika ny “fifanekena”.
Tao amin'ny lahatsoratra hafa, nilaza ny fanambarana tamin'ny taona 2010 nosoniavin'ireo mpikambana sasany ao amin'ny Parlemanta sasany koa izy, fa “nametraka fepetra mikasika ny mangarahara amin'ny fizotry ny fifanekena ireo parlemanta mpikambana ary naneho ny fisalasalany ihany koa mikasika ny votoatin'ny fifanekena”. Nogueira nizara ny lisitr'ireo solombavambahoaka, sy ny adiresy mailakany, ary nanasa ny mpamaky mba “hanontany ireo izay nanao sonia raha efa afaka sahady ny fisalasalany, sy ireo izay tsy nanao sonia sy ny antony tsy nanaovany izany, inona ny hevitr'izy ireo/ny fanapahan-kevitr'izy ireo momba ny lohahevitra”.
Na dia misokatra hatramin'ny volana 31 Martsa 2012 aza ny fanaovan-tsonia ny fifanekena, tao anatin'ny roa herinandro fotsiny dia efa nahangona sonia 2.1 tapitrisa sahady ilay fitakiana manerantany nokarakarain'i Avaaz.